Kpaliri Steel Waya eriri, kpaliri Waya eriri - Bangyi
Igwe anaghị agba nchara Waya eriri 2
Okwu mmeghe anyi
Binzhou Bangyi Metal Products Co., Ltd. e guzobere na 2010 na Binzhou, azụmahịa ụzọ ámá obodo nke Shandong. Factorylọ ọrụ na-ekpuchi mpaghara nke mita 10,000. Companylọ ọrụ a nwere ọnọdụ dị elu karịa, na nso Port Qingdao. Binzhou Bangyi Metal Products Co., Ltd. bụ onye-nkwụsị mmepụta enterprise tụnyere mmepụta, R&D, ahịa na ọrụ.
Companylọ ọrụ ahụ ga-agbaso usoro ihe ọmụma azụmahịa na ebumnuche nke ịkwụwa aka ọtọ na mmesi obi ike, ma were usoro njikwa njikwa nke na-ekwusi ike njikwa ọrụ na ahụmịhe ndị ahịa, na-azụ ahịa mgbe niile, na-aga n'okporo ụzọ nke mmepe na-adigide dị ka onye ndu, ma na-agba ọtụtụ ụlọ ọrụ ume ka ha jiri anyị na ngwaahịa.
China rụpụta kpaliri Steel Waya eriri, Electro kpaliri Steel Waya eriri, Igwe anaghị agba nchara Waya eriri ịkwanyere ntekwasa, Vkwanyere ntekwasa kpaliri Steel Waya eriri, Steel Waya eriri kpaliri, Eriri igwe anaghị agba nchara Waya eriri,